Rudzi: Weight correction
Ndiudze, pzhl. , mushonga weReduxin unotengeswa nachiremba here? Uye ndeupi musiyano uripo pakati pegadziriro Reduksin naReduksi. Kana zviri zveReduksin Chiedza, usatombofunga nezvazvo, ingo kurasa usimbe hwako ...
Ndeupi huremu hwakajairwa pa13 yevasikana? Kune vasikana, huremu hwakajairwa ndeye 43-52 kilograms. Kana iyo huremu iri pasi pe 32 uye inopfuura 69 kilograms, saka izvi zvingangoita chirwere. Kwandiri…
Chii chaunogona kudya kwekudya kwemanheru paunenge uri paKudya? Kana iwe uri pane chikafu, saka iwe unogona kudya kwekudya kwemanheru, zvakaringana zvinoenderana muchanza cheruoko rwako. Zviri nani kudya kashanu mu ...
Ndezvipi zvekudya zvinokonzeresa dumbu uye mativi uye kuti ungazvibvisa sei? idya zviwitsi zvishoma uye chikafu chekupedzisira chinofanira kunge chiri maawa matatu nguva yekurara isati yatanga !!! Nezve dumbu, gwinha zuva nezuva ...
Kuwana uremu nekukurumidza, chii chekuita? http://sportbok.narod.ru/fit.html Iwe unongoda kufambisa yakawanda - huremu - kana mafuta - izvi hazvina kupiswa macalorie - sezvo uchidya zvishoma, zvinoreva kuti unofamba zvishoma - ...
Sei uchirasikirwa nehuremu kubva kunetseka uye tsinga? Nekuti hapana chishuwo chekudya, saka uri kudzikira uremu. Ndiri kukora. Ini pachangu, kana ndiri mutsinga dzangu, ndinokanganwa nezvechikafu - ndinonwa mvura uye ndinoputa zvakanyanya. Naizvozvo…
Uchi pane chikafu ?? uye mangani macalorie ari mu 1 teaspoon yeuchi. Zvese zvaunoziva, uye pauri pachezvako. Chii chine macaloric ehuchi ane chekuita nacho? Unogona kutsiva shuga neuchi mangwanani, nekuti zvine ...
Ndezvipi zvivakwa zvine prunes, uye zvinobatsira kurasikirwa nekurema zvachose? haungarasikirwe nehuremu hwakawanda nayo, ine macarhydrate mazhinji, asi kune zvitoro zvakapfava - hongu, inogadzirisa kugaya. Unambiguously inobatsira. ...
Kudya: Ko protein protein yehove inokwanisa kutsiva nyama protein? Iko hakuna zvikafu zvakawanda pasi pano zvakapfuma mu omega-3 fatty acids uye ese akakosha amino acids ayo akanaka kune moyo nemidziyo yeropa. Muhove, izvo zvirimo ...
kana. pane kabichi rimwe zvinoita here kuonda ??? Yakadzika-koriori kabichi…. shamwari yangu akaidya (iye murayiridzi wemuviri). Akati iwe unogona kudya zvakanyanya sezvaunoda. Asi panguva imwecheteyo, aidya kottage chizi uye ...
Ndeipi yakanaka svusvura kana iwe ukatanga kudzikira uremu? kottage chizi.)) system kubvisa makumi matanhatu ... musimboti wekuseni kusvika gumi nembiri ndizvo zvese zvaunoda, usinga tarise kukuvadza uye huwandu hwe macalorie, masikati uye ...
chii chinonzi nhanho aerobics? Stepaerobics ndeyekutamba maekisesaizi akaitwa neakakosha mapuratifomu "nhanho". Nyanzvi dzinofunga kuti nhanho aerobics yakanakira kudzivirira uye kurapwa kweosteoporosis uye arthritis, uye yekusimbisa mhasuru ...
Ndokumbira undiudze kuti ndechipi chinonyanya kushanda chikafu chisina kukuvadza kuhutano ??? Chinyanya Kubudirira: Bon Soup Kudya Kudya kwemazororo kunosiya mucherechedzo padumbu rako, zvidya nemagaro? Iko kufunga kwe ...
Maitiro ekudzora huremu kumba idya zvishoma) Idya kumba chero chaunoda, asi kwete muzvikamu zvakakura uye geza uriri mazuva ese nemaoko ako How kudzora huremu kumba ndiwo mubvunzo. Uye iwe unogona pamwe kurasikirwa uremu ...
iro izwi rekuti KUYEMA rinorevei kune vatambi? munguva pfupi yapfuura akaona mumwe mutambi akanyora kuti aiyanika. Ndinganzwisisa sei? chinhu chakakosha kupfuura zvese chawakanganwa vakomana! Chinhu chikuru kudzidzisa! uye imi mese ndezvekudya ...
Unogona here kudya funchose uchidya? Ikoji yekoriori ye funchose mufomu yakapera yakanyanya kushoma pane fomu yakaoma, uye ingori 87 kcal pa100 g yechigadzirwa. Saka, iyo macalorie zvemukati zvakabikwa funchose ...
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,839 masekondi.